TETRIS Blitz 5.2.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.2.2 လြန္ခဲ့ေသာ4ရက္က
ဂိမ္းမ်ား ပေဟဠိ TETRIS Blitz
TETRIS Blitz ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးပဟေဠိဂိမ်းထဲကတစ်ခုအပေါ်ကို EA ရဲ့မြန်နှုန်းမြင့်, action ကို-ထုပ်ပိုးယူတွေ့ကြုံခံစား! ဒါဟာရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကြည့်နဲ့ခံစား, သငျသညျအဆငျ့ကိုတက်အဖြစ်ရရှိရန် Power-ups ဆုချီး, နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူပြင်းထန်သောစစျပှဲမြားအပါအဝငျစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လတ်ဆတ်တဲ့ features တွေနှင့်အတူနှစ်မိနစ်Tetris®ပါပဲ။
GAME ပြောင်းလဲနေတဲ့ပါဝါ-UPS သော့ဖွင့်
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် Power-ups နှင့် Frostbite, နယ်, Mino ရိန်းနှင့်ထို့ထက် ပို. များကဲ့သို့ချောနှင့်သင်၏ဂိမ်းနှင့်ခလုတ် Point-တိုးမြှင်တုံ့ပြန်မှု Supercharge ။ အခါသင်ပြီးပြည့်စုံသောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဖြစ်ရပ်များ Shards ဝင်ငွေနှင့်မြင့်မားသောရမှတ်များအဘို့သင့်ကို Power-ups အဆင့်မြှင့်တင်ရန်သူတို့ကိုအသုံးချ!
သင်သည်တတ်နိုင်သကဲ့သို့အများအပြားဒင်္ဂါးပြားထိပ်တန်းရမှတ်များရောက်ရှိတိကျတဲ့ Power-ups နှင့်အတူလိုင်းအစုတခုအရေအတွက်ကရှင်းလင်း, ဒါမှမဟုတ်စုဆောင်းဖို့အပြေးပြိုင်ပွဲ။ ကြောက်မက်ဘွယ်ဆုလာဘ်အနိုင်ရပြိုင်ပွဲများ, စစျပှဲမြား, Daily သတင်းစာစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ထို့ထက် ပို. အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောလှုပ်ရှားမှုများ။ Plus အား, သင် play အဖြစ် mini ကိုဆုကြေးငွေများအတွက်ကျိကျိတက်အပတ်စဉ် Quests play, သင်ပြီးစီးသည့်အခါပင်ပိုကြီးဆုလာဘ်ဝင်ငွေ!
ပေါက်ကွဲ Tetris ဆိုးကျိုးများခံစားကြည့်ပါနှင့်သင်တွေ့ရခဲသောပျော်ပါး mode ကိုဖြစ်ပေါ်သည့်အခါနှစ်ဆအချက်များကိုကောက်ယူလိုက်ပါ။ ပျော်ပါးနေပြန်-to-ပြန်လိုင်းများကိုရှင်းလင်းဖို့, နှင့်လှိမ့အချက်များစောင့်ရှောက်သောရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကက်စကိတ်တို့ကလွရပွဲစဉ်လုပ်ကွက်။ ဒါဟာ Tetrimino ကိုနောက်ကောက်ပဲ!
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင်းဆုံးရမှတ်များအတွက်ရည်ရွယ်နှင့်သင်ဦးဆောင်သူထိပ်ဆုံးမှသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူကထွက် duel အဖြစ်အခွင့်အရေးများကွှားပွောအနိုင်ရ။ ကန့်သတ်အချိန်ပြိုင်ပွဲများအတွက်အောင်ပွဲမှ multiplayer BLITZ စစျပှဲမြား, ဒါမှမဟုတ်အပြေးပြိုင်ပွဲအတွက်အခြားကစားသမားဆန့်ကျင်ပွဲစဉ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်သင်အိမ်ပြန်အဆိုပါအနိုင်ရယူနိုင်လျှင်ကြည့်ပါ။
Tetris Blitz ၏ယခုပင်လျှင်ပရိတ်သတ်? ကျွန်တော်တို့ကို Facebook ပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းကို Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုကျနာကဲ့သို့ပင်:
မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့အ https://help.ea.com/ သွားရောက်ကြည့်ရှု။
EA ၏ www.ea.com/1/service-updates အပေါ် posted ရက်ပေါင်း 30 '' အသိပေးစာပြီးနောက်အွန်လိုင်း features တွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအနားယူစေနိုင်သည်။
EA ၏ (မရရှိနိုင်လျှင်) e-mail, နှုန်း 30-ရက်ပေါင်းအသိပေးစာပြီးနောက်အွန်လိုင်း features တွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအနားယူနှင့် www.ea.com/de/1/service-updates အပေါ် posted လိမ့်မည်။
အရေးကြီးစားသုံးသူပြန်ကြားရေး: ဒီ app ကို: ကို EA ရဲ့ Privacy & Cookie ပေါ်လစီများနှင့်အသုံးပြုသူသဘောတူညီချက်များ၏လက်ခံမှုလိုအပ်သည်။
, In-ဂိမ်းကြော်ငြာလည်းပါဝင်သည်; (အသေးစိတ်ကိုသီးသန့်လုံခြုံရေး & Cookie ပေါ်လစီတွင်ကြည့်ပါ) တတိယပါတီကြော်ငြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့် analytics နည်းပညာသော်လည်းဒေတာစုဆောင်း, 13 ကျော်တစ်ဦးပရိသတ်အတွက်ရည်ရွယ် social networking site များတိုက်ရိုက်လင့်ခ်များပါဝင်သည်; အင်တာနက်ကိုတိုက်ရိုက်လင့်ခ်များပါရှိသည်။
Tetris ® & 1985-2014 Tetris Holding ကုမ္ပဏီ©။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
TETRIS Blitz အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
TETRIS Blitz အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
TETRIS Blitz အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
TETRIS Blitz အား အခ်က္ျပပါ
sommydany စတိုး 10.51k 1.86M
TETRIS Blitz ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း TETRIS Blitz အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.2.2
ထုတ်လုပ်သူ EA Swiss Sarl
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://privacy.ea.com/en
App Name: TETRIS Blitz
File Size: 104.63MB
Release date: 2019-08-14 08:32:33
လက်မှတ် SHA1: 12:F1:98:C1:38:45:05:B5:B2:66:01:2E:3D:F0:DC:C2:25:E9:CB:43
ထုတ်လုပ်သူ (CN): EAM
အဖွဲ့အစည်း (O): EAM
နယ်မြေ (L): LA
TETRIS Blitz APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ